UNWTO waxaa iska leh Xoghayaha Guud: Lumay Turjumaada?
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Wararka Dowladda » UNWTO waxaa iska leh Xoghayaha Guud: Lumay Turjumaada?
Guddiga Dalxiiska Afrika • Wararka Ururada • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Dowladda • Wararka Kenya • Moroko News • News • Dadka • Wararka Spain • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda
Marrakesh, Madrid, ama Nairobi - tani waa su'aasha. "Waan ku ogeysiin doonaa isla marka uu jiro qiiq cad," ayaa jawaab celintu ahayd eTurboNews oo uu afhayeen u hadlay wasiir caan ah oo ku lug lahaa dooda goobta lagu bedelayo shirka golaha guud ee UNWTO ee soo socda.
Saddex maalmood ka hor, Xoghaynta Hay’adda Dalxiiska Adduunka ee Qaramada Midoobay ayaa ku dhawaaqday in la beddelayo goobta lagu qabanayo 24-ka ee soo socda.th Fadhiga Golaha Guud, oo lagu wado inuu ka dhaco Marrakesh, Noofembar 30 - Diseembar 3, 2021
Xoghaynta, ka dib markii ay la tashatay Guddoomiyaha Golaha Fulinta iyo Dawladda Spain waxay ku wargelisay Dawladaha xubnaha ka ah in goobta cusubi ay noqon doonto Madrid, isla taariikhahaas.
Najib Balala, Xoghayaha Dalxiiska ee Kenya ayaa shalay ku casuumay UNWTO inay shirkeeda guud ee 2021 ku qabato Kenya.
Golaha Guud ee soo socda ee Ururka Dalxiiska Adduunka (UNWTO) ayaa laga yaabaa inuu si aad ah u noqdo shirkii ugu muhiimsanaa ee ay hay'addan xiriirka la leh Qaramada Midoobay weligeed yeelato.
Marrakesh, Madrid ama Nairobi, iyo goorma?
Shirweynaha guud ma dhici doona 30ka November mise waqti danbe ?
Shirweynaha guud ma ka dhici doonaa Marooko wakhti dambe ama November 30 ka Spain ama Kenya?
Luqadda loo adeegsaday warqadda Marooko ee loo diray Xoghaynta UNWTO ee ku taariikhaysan Oktoobar 15 waxay ahayd Faransiis. Waxay u muuqataa in qaybo ka mid ah warqaddan laga yaabo inay lumiyeen tarjumaad ahaan.
Akhrinta xidhiidhkan Dawlada Marooko waa in su'aal la iska waydiiyaa haddii cawaaqibkeeda macquulka ah ay runtii tahay codsi ah in si fudud loo beddelo goobta Marrakesh ilaa Madrid?
Global macnaheedu waa caalami, iyo xaaladda hadda jirta ee COVID-19 ee caalamiga ah isma beddesho haddii laga eego Morocco ama dhinaca Isbaanishka.
Laakin waxa jira qodob dhab ah oo daahsoon oo siinaya aragtida ah in Xoghayntu, sabab qaar ka mid ah ay si fudud u maleeyeen, ama si ula kac ah u maroorsadeen isgaadhsiinta Dawladda Marooko.
Haddii qeexida wakhtiga ama goobta ama labadaba lagu dhejin lahaa isgaadhsiintan Dawlada Marooko codsanaya beddelka goobta waxay ahaan lahayd mid sax ah.
Si kastaba ha ahaatee, lafteedu, warqadda ay soo dirtay dawladda Marooko ayaa laga yaabaa in aan loola jeedin in la waydiiyo guuritaanka waddan, laakiin codsi fudud oo lagu doonayo in dib loo dhigo shirka guud ee lagu qoray erey diblomaasiyadeed oo Faransiis ah.
Xaqiiq ahaan, way adag tahay in la rumaysto in xaaladda caalamiga ah ee hadda jirta ee masiibada ay wax isbeddel ah samayn lahayd haddii Madrid ama Marrakesh laga bilaabo barta badbaadada iyo amniga.
Intii u dhaxaysay Oktoobar 18 iyo 22, Spain waxay diiwaangelisay 13,346 xaaladood oo cusub, ie celceliska maalinlaha ah ee 57.13 milyan, halka isla muddadaas, Morocco kiisaska cusub ay ahaayeen 1,350, ie celceliska maalinlaha ah ee 7.49 halkii milyan, taas oo sideed jeer ka yar. .
Comunidad de Madrid ayaa soo saarta warbixinno toddobaadle ah oo ku saabsan masiibada. Midka ugu dambeeya waxa uu tixraacayaa toddobaadka Oktoobar 11-15 wuxuuna diiwaangeliyaa celceliska maalinlaha ah ee 44.4 xaaladood oo cusub halkii milyan. Taasi toddobaadka soo socda weli lama daabicin, laakiin xogta caalamiga ah ee Spain ayaa diiwaangelisay koror 13%.
Marooko, xogta Marrakesh ee maxalliga ah aad ayay u hoosaysaa, iyadoo loo eegayo dhawr unug halkii milyan.
In ka eTurboNews maqaal shalayto, waxaa la soo jeediyay in wax ka bedelka goobta uu yahay tallaabo kale oo uu qaaday Xoghayaha Guud ee hadda jira, kaas oo ololihiisa doorashada uu sababay in wax ka badan hal il-wareer ay ka soo baxaan dadka aqoonta u leh anshaxa Qaramada Midoobay.
Golaha loo dhan yahay ayaa noqon doona goobta lagu shaabadeeyo xaqiijinta codadka ay Golaha Fulinta ee UNWTO siiyeen in lagu doorto SG-ga hadda jira muddo 2 sano ah oo cusub.
Haddii Dawladaha xubinta ka ah ay matalaan Golaha Guud safiiradooda Madrid ama haddii ay jiraan wax badan oo aan bandhigyo ahayn, falanqaynta eTurboNews maqaalku sax ayuu noqon lahaa.
Si kastaba ha ahaatee, daruuri maaha sidaas. Isbaanishka, jumlada inta badan la isticmaalo waa "Le salió el tiro por la culata" laga yaabee in ka badan muujinta tarjumaadda Ingiriisiga "xabaddii dib loo riday".
Dalka Marooko ayaa dhawaan xanibay duulimaadyo ka imaanayay dalal dhowr ah. Tani maaha xaalad Spain. Spain waa mid ka mid ah dhowrka waddan ee Yurub ee u oggolaanaya gelitaanka karantiil la'aan kuwa si buuxda loo tallaalay.
Haddii tani ay kicin doonto falcelinta dalalka ay ka reeban yihiin dhaqdhaqaaqii xoogganaa ee uu sameeyay Xoghayaha Guud ee hadda jira sannad ka hor doorashadii Guddiga Fulinta waa lama saadaalin karo laakiin waa suurtogal. Waxaa inta badan saameyn ku yeelan doona awoodda wadamada Carabta, Afrikaanka, iyo kuwa yar yar ee Latin America.
Waxaa laga yaabaa inay xiiso leedahay in la falanqeeyo habka beddelka goobta.
Faallada ugu horreysa waxay ku saabsan tahay waqtiga: Noofambar 2020 Bangiga Adduunka IMF iyo Dowladda Marooko waxay go'aansadeen in dib loo dhigo shirka sannadlaha ah ee IMF muddo hal sano ah. Hadda waxaa loo qorsheeyay Oktoobar 2022 magaalada Marrakesh.
Waqtiga isbeddelka, kiisaska maalinlaha ah ee COVID ee Morocco iyo Spain ayaa toban jeer ka badan hadda. Tani wax walwal ah kama aysan keenin UNWTO.
Muddadaas ajandaha Xoghayaha Guud waxa uu ahaa mid diiradda lagu saarayay wax ay dad badani u arkayeen shaki. Golaha fulinta ayaa kulmay xilli uu si xun u dillaacay COVID-19 iyo masiibo cimilo. Musharixiinta diyaarka u ahaa in ay la tartamaan Zurab ayaan waqti u helin in ay si sax ah u soo gudbiyaan warqadaha waxaana la yaab ku noqotay.
Ergada golaha fulinta ee u fasaxday Zurab mar labaad waxay ahaayeen qaar ka mid ah wakiilada safaaradaha laakiin ma ahayn musharraxiin run ah (Wasiir)
Midda labaad waa qodob farsamo.
Ku dhawaaqista Xoghaynta UNWTO ayaa lagu sheegay in xogta goobta cusub ee GA ay tahay “Iyadoo la raacayo hay’adda loo igmaday hab-raacyada xulashada goobaha lagu qabanayo kalfadhiyada Golaha Guud ee Golaha Guud ee Golaha Guud ee Qaraarka 631 (XX)” .
Haddaynu tixraacno qoraalka qaraarka 631(XX), ee laga heli karo Shabakadda mala-awaalka ergadaasi ma jirto. Waxaa laga yaabaa in Xoghayntu ay tixraacday qodobka 8.2 ee Xeer-hoosaadka, xitaa haddii lagu beddelo qodobka I.7.
Qaramada Midoobay waa inay sii xoogaysataa, waana in la dejiyaa dariiqyo ka wanaagsan cabashooyinka.
Dhaleeceynta WHO, awood la'aanta WTO inay ka jawaabto codsiga Hindiya iyo Koonfur Afrika ee ah in shatiyada tallaalka la xoreeyo inta lagu jiro masiibada, waa khataro ujeedo leh.
Dalxiiska waa mid ka mid ah ilaha dhaqaale ee ugu muhiimsan dalal badan, gaar ahaan kuwa soo koraya. Hay'addeeda Qaramada Midoobay waxay u qalantaa maaraynta taas oo go'aan qaadashada ay tahay mid la fahmi karo oo loo hoggaansamo qawaaniinta, ma aha in la yiraahdo si hufan.
Marka la eego tixgelinta noocaas ah, ma noqon karto wax la yaab leh in dunidu ay soo dhaweyso oo ay ammaanto ku dhawaaqida deeqsinimada leh ee degdegga ah ee Kenya ee ku saabsan martigelinta Golaha Guud ee bisha soo socota.
Kenya waxay leedahay mid ka mid ah xaaladaha ugu hooseeya ee COVID-19, 1.73 milyankiiba siddeedii maalmood ee la soo dhaafay, waxayna martigelisaa laba ka mid ah hay'adaha Qaramada Midoobay ee ugu muhiimsan, iyo, ugu dambeyntii, laakiin ugu yaraan, mabda'a wareegga juqraafi waa la ixtiraami doonaa.
Ururka Dalxiiska Adduunka kama tirsana Xoghayaha Guud. Ma aha isaga in uu aqbalo, diido ama iska indhatiro codsiga Kenya
Waa in uu si degdeg ah u raacaa xaaladdu u baahan tahay habraaca ay xoghayntu sheegtay in ay u hoggaansantay isgaarsiinteedii usbuucii la soo dhaafay, taasoo uu qeexayo qaraarka aan kor ku soo sheegnay.
Sidaa darteed, waxaan filayaa in isla markiiba UNWTO ay Kenya ku wargeliso shuruudaha ay Nairobi ku ogolaanayso inay martigeliso shirka guud ee soo socda.
IMEX America dambi baa lagu helay! Kulamo cusub iyo...
Wasiirka Dalxiiska Jamaica: Adduunka cusub ee caafimaadka iyo...
Teknoolojiyadda duulista ee NASA si ay waqtiga u badbaadiso rakaabka garoonka
Jordan si ay dib ugu soo ceshato dardargelinta dalxiiska ee ka hor cudurka faafa...
Qalalaasaha safarrada dibadda oo lagu eedeeyay siyaasadda dowladda
eTurboNews Wariyaha si uu uga hadlo muhiim...